Shirkii Golaha Wasiirada Soomaaliya oo looga hadlay Amniga iyo arrimo kale – Puntland Post
Posted on December 7, 2017 December 7, 2017 by Liban Yusuf
Shirkii Golaha Wasiirada Soomaaliya oo looga hadlay Amniga iyo arrimo kale
Shirkii caadiga ahaa ee Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya maanta yeesheen oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa looga hadlay arrimaha amniga, Shirwynaha Culumada, ansixinta Istraatejiyada Amniga iyo arrimo kale.
Ugu horreyn, Wasiiru Dowlaha Amniga Mudane Xasan Macalin ayaa ka warbixiyey xaalada amniga dalka, isagoo sheegay in howlgalada xasilinta ay si xowli ah u socdaan oo degmada Afgooye lagu soo qabtay labo maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan oo shacab dil u geystay. Sidoo kale degmada Diinsoor waxaa isu soo dhiibey gaari Cabdi Bile ah iyo maleeshiyadii la socotay iyagoo ka faa’iideysanya cafiskii Madaxweyne Farmaajo. Wasiir ku xigeenka Amniga Abdinasir ayaa Golaha Wasiirada uga warbixiyey Istraatejiyada Amniga Gudaha ee 2017 – 2022 tanoo ka tarjumeysa siyaasada amniga, saldhigna looga dhigay Qorshaha Horumarinta Qaranka. Ujeedada Istraatejiyada ayaa ah in muwaadin walba loo abuuro jawi amni ah oo la isku haleyn karo.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Marwo Khadija Maxamed Diiriye ayaa golaha warbixin buuxa ka siisyey qorshaha hirgelinta tartanka cayaaraha kubadda cagta ee Dowlad Goboleedyada iyo G/Benaadir oo maanta lagu daahfurayo Muqdisho. Wasiir Khadiija ayaa sheegtay in hirgelinta tartankan uu ku yimid wadatashi muddo socday oo gobollada qaarkood ay booqdeen. Hirgelinta tartankan ayaa waxey dhiirigelineysaa is-dhexgalka bulshada.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Juxa iyo Wasiiru Dowlaha Weheliye ayaa golaha siiyey warbixin la xiriirta Heshiiskii taariikhiga ahaa ee 6dii December 2017 ay GalMudug iyo Ahlu Sunna ku heshiiyeeen inay dhistaan maamul loo dhanyahay. Wasiirada ayaa sheegay in uu Madaxweyne Farmaajo markii la doortay Sheikh Shaakir ku casuumay Caleemasaarkii oo tan iyo markaas Dowlada Federaalka ay ku howlaneed sidii heshiiskan taariikhiga ah loo gaari lahaa. Heshiiskan ayaa dhigaya in Madaxda GalMudug ay sidooda ahaanayaan, hase yeeshee lagu soo kordhinayo jagada Madaxa Xukuumada oo Sheikh Shaakir uu noqonayo, waxuuna shir-guddoomin doonaa golaha wasiirada GalMudug. Heshiiska ayaa lagu sii dhameystiri doonaa Dhuusamareeb usbuucyada soo socda.
Golaha ayaa waxaa looga warbixiyey shirarkii 3da, 4ta iyo 5ta December 2017 ka dhacay Muqdisho oo kala ahaa Shirkii Golaha Amniga Qaranka oo ay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada qeyb ka ahaayeen, Shirkii Amniga ee 4ta December iyo kii Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee 5tii December. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in shirarkaas ay muhiim u ahaayeen geedi socodka Soomaaliyada cusub iyadoo lagu soo bandhigay waxqabadkii Dowladda ee dhanka siyaasada, dib u eegista dastuurka, dib-u-heshiisiinta, federaaleynta, doorashooyinka, maamulka iyo maareynta maaliyada iyo sugida amniga. Golaha ayaa ammaanay doorka dadkii soo qabanqaabiyey ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha sida Hay’ada isku-xirka Deeqaha (ACU).
Wasiirka Arrimaha Dibedda ayaa ka warbixiyey maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Seychelles oo uu xabsiga ku booqday, isla markaasna Dowladda Seychelles la soo saxiixday heshiis maxaabiista loogu soo celinayo dalka. Sidoo kale Wasiirka ayaa ka warbixiyey shirkii Afrika iyo Yurub oo ka dhacan Abidjan oo diirada lagu saarayey xoojinta xiriirka Afrika iyo Yurub isla markaasna diirada lagu saaray shaqo abuurka dhalinyarada Afrika. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu kulan la soo qaatay Wasiirka Romania oo aad u daneynaya Soomaaliya iyo heshiis diblomaasiyadeed oo ay la soo saxiixday dalka Lithuania.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Diinta ayaa ka warbixiyey shirweynaha Culumada Soomaaliyeed oo Muqdisho ka furmi doona 16ka December 2017, kaasoo looga dan leeyahay in la xoojiyo doorka culumada Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah bulshada iyo in Culumada ay hormuud ka noqdaan soo celinta amniga dalka iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah.
Ugu danbeyntii Golaha Wasiirada ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii Hooyada Fanka Soomaaliyeed Shamis Abokar Guduudo-Carwo oo arroortii maanta ku geeriyootay Hargeisa. Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in Guduudo-Carwo ay door muhiim ah ka soo qaadatay Fanka & Suugaanta Soomaaliya, sheegeyna in shaqsi sumcad weyn ku dhex leh bulshada uu ka baxday bahda fanka iyo suugaanta. Golaha ayaa EEBBE uga baryey inuu jannadii Fardowsa ka waraabiyo, samir iyo Iimaan ka siiyo qoyskii iyo ehelkii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed.